Hokkora Benishaangul Gumuzitti dhalaten namoonni 4 du'an, 26 miidhaman - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Caalaa Waakshuum
Walitti bu'iinsa Asoosaatti dhalateen lubbuun namaa darbe
Walitti bu'insa Mootummaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Magaalaa Asoosaa fi naannoosheetti uumameen lubbuun namoota 4 darbuun namoota 26 irra miidhamnii qaamaa cimaa fi salphaan dhaqqabuu Komishiniin Poolisii naannichaa beeksise.
Komishinerri komishinii Poolisii Mootumaa Naannoo Beenishaangul Gumuz, Komishiner Abdallaa Sheyid, walitti bu'insa magaalaa Asoosaa keessatti uumameen lubbuun namootaa darbuufi dhaabbileen tajajila kennanis yeroodhaaf dhaabbachuu himaniiru.
Ka'umsi walitti bu'insa kanaa gaaffilee misoomaa biroo dabalatus, namootni jaha ukkamsamanii fudhatamuu akka ta'e komishiner Abdallaan himaniiru.
''Ka'umsisaa, torban lama dura dargaggootni jaha- sadii saba Bartaa keessaa sadii ammoo saba Tigireerraa osoo daandii guddicha gara Finfinnee geessurraan gara Asoosaa dhufaa jiranii, qaama hin beekamneen Mootummaa Naannoo Oromiyaa keessatti ukkaamfamanii fudhatamuusaaniiti'' jedhan.
Namootni fudhataman kunneen namni lama saba Bartaa irraa miseensa poolisii federaalaati. Tokko ammoo miseensa poolisii naannoo Benishaanguli.
Komishinar Abdallaan, rakkoon kun kan uumame beekamtii mootumaaa naannoo Oromiyaatiin akka hin taane himuun, naannoleen lamaanis hojiilee misoomaa hedduu dabalatee kanneen biroorrati waliin hojjechuuf waliigaltee akka mallateesanii jiran himaniiru.
''Haa tahu malee gidduutti dargaggotni saba Bartaa miiraan kaka'uun walitti bu'insi jalqabee, dheengadda lubbuun nama tokkoo darbeera'' jedhu Komishinarichi.
Har'as magaalaa Asoosaa keessatti jeequmsichi itti fufuun lubbuun namoota lamaa darbuun, namootni 13 tahan ammoo madaa'uun hospitaala galuu himaniiru.
''Miidhaalee kanneen teenyee mari'achuun hiikuun ni danda'ama ture, namootatu ariifate malee'' jedhu Komishinar Abdallaan.
Mootummaan Naannoo Beenishaangul Gumuzis Mootummaa Naanoo Oromiyaa'' waliin taanee namoota dhabaman barbaadnee uummataaf dhiyeessuuf hojjecha jiras'' jedhaniiru.
Benishaangulitti namoonni 2 ajjeefaman, 40 miidhaman.
Dabalataanis rakkoo naannoo Toongootti uumameen lubbuun nama tokkoo darbuufi namootni torba miidhamuun hospitaala galuu himaniiru.
Ajjechaan achitti raawwate poolisii naannichaan akka tahe jiraattotni himanis, komishinar Abdallaan garuu kun gonkumaa dhugaa miti jedhaniiru.
Yaaddoo nageenyaa naannoo Toongoo jiruun namootni kuma lamaa ol gara Beegiitti akka baqatanii jiran gabaasuun keenya ni yaadatama.
'Qaala'iinsi meeshaalee bu'uuraa nu yaaddesse' - jiraattota magaalota Oromiyaa
Libaananiitti dhohinsa kaleessa mudateen 100 ol du'anii kumi 4 ol ammoo ma'daa'an